အနမ်းလက်ဆောင် | YoeYar CG Blog
6 thoughts on “အနမ်းလက်ဆောင်”
johnmoeeain on February 7, 2010 at 7:47 pm said:
Good Idea !!! :)
စာသင်သွားရင် ဇီးကွက်တွေ ယုန်ဖြူလေးတွေ ကို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ လွယ်အိတ်ကလေးတွေလွယ်ပြီး active ဖြစ်နေတဲ့ အပိုင်းလေး ပါရင် ပိုကြည့်ကောင်းမှာပဲ.. အားလုံးကောင်းပါတယ်.. ဒါလည်းထည့်ရင် ပို ခံစားလို့ကောင်းမယ် ထင်လို့ပါ…… :D
Lionslayer on February 7, 2010 at 9:16 pm said:
ဟုတ်တယ်… အဲဒီတုန်းက အဲဒီ Scene က Storyboard ထဲမှာ ရှိတယ်.. Model ဆွဲရမှာပျင်းလို့ သက်သက်ချန်ထားခဲ့တာ.. :P
MagicianA on February 8, 2010 at 3:46 am said:
Huh? ဦးနီကုတ္ ေဖာင့္ၾကီးက အဂၤလိရွ လိုလဲျမင္ရဘူး
Lionslayer on February 8, 2010 at 5:09 am said:
That’s Firefox issue in Windows 7. See with IE.
NYAN LIN TUN on January 7, 2011 at 12:00 am said:
Phyo Zay on August 19, 2011 at 5:46 am said:
but I have not whoever give me kiss.